ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပေးရန် နေပြည်တော်အထိ လမ်းလှေ - Yangon Media Group
ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပေးရန် နေပြည်တော်အထိ လမ်းလှေ
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၂၃
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ဒဟတ္တောကျေးရွာအုပ်စု အောင် သပြေကျေးရွာအနီး ဆောင်ရွက် နေသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းအား ရပ်ဆိုင်းပေးရန် မန္တလေးမှ နေပြည် တော်အထိ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ် ဖော်သော အောင်သပြေကျေးရွာနှင့် သရက်ကိုင်းကျေးရွာတို့မှ ဒေသခံများကို ဇူလိုင် ၂၃ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် မန္တလေး- မတ္တရာလမ်းပေါ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတားဆီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
”ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘက်လိုက်ပြီးတော့ တစ်ဖက်သတ် အဖိနှိပ်ခံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိအောင်ဆိုပြီး တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံတို့၊ သမ္မတကြီးတို့သိအောင် အခုလမ်းလျှောက်လာကြတာပါ။ ဒါကို ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေကတားတယ်။ ဖြစ်သင့်သလားဗျာ။ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကနေတစ်ဆင့် နေပြည်တော်အထိဆန္ဒပြဖို့ ရဲစခန်းကို ခွင့်ပြုမိန့်တင်ခဲ့တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးထိခိုက်မှုတွေပါရှိတယ်ဆိုပြီး ခွင့်ပြုမိန့်မပေးခဲ့ဘူး”ဟု ဒေသခံဦးရွှေအုန်းကပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဒေသခံများအနေ ဖြင့် ယင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံအပြီး အပိုင်ဖျက်သိမ်းပေးရေး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြုတ်ချပေးရေးနှင့် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်က တောင်သူ ဒေါ်မြမြကို ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့် အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒထုတ် ဖော် လမ်းလျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒေသခံတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်မယ်ဆိုလို့ နှစ်ကြိမ်တိုင်ခွင့်ပြုပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နယ် ကျော်တွေလည်းဖြစ်တဲ့ ခွင့်ပြုမိန့်ကို တားမြစ်ခဲ့တာပါ။ ပုသိမ်ကြီးမြို့ နယ် ကျေး/လက်လမ်းတံတားဦးစီးဌာနက ဒေသခံလေးဦးကို လမ်းတံတားဥပဒေပုဒ်မ-၂၂ နဲ့ အမှုဖွင့်ထားလို့ မနေ့က တစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့သုံးဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်သွားမှာပါ” ဟု ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ရဲမှူး မျိုးညွန့်သန်းက ပြောကြားသည်။
ဒဟတ္တောကျေးရွာအုပ်စု သရက်ကိုင်းကျေးရွာနေ ဒေါ်မြမြသည် ၎င်းပိုင်သည့်ခြံအား ဝင်းခတ်ခဲ့ရာ အောင်သပြေ-သရက်ကိုင်းကျေး ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင် ကျူးကျော်ခတ်သည်ဟုဆိုကာ ပုသိမ်ကြီးမြို့ နယ် ကျေး/လက်လမ်းတံတား ဦးစီးဌာနမှ လမ်းတံတားဥပဒေပုဒ် မ-၂၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည့်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဇူလိုင် ၂၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကို အမည်မသိသူများက ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အတွက် တရားခံ ဖမ်း?
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးအနေဖြင့် စည်ပင်အဖွဲ့များအား နိုင်နင်းစွာ စီမံကွပ?
ငမိုးရိပ်ချောင်းတစ်လျှောက် ပြေးဆွဲမည့် Yangon Water Bus ခရီးစဉ်အတွက် ဆိပ်ကမ်းများ တည်ဆောက်ရန် လေ့လ?
၂ဝ၁၉ မှာ လိုက်ဖ်ရှိုး ၁၃ ပွဲအထိ ဖျော်ဖြေသွားမယ့် The Rolling Stones ဂီတအဖွဲ့
ပြည်ပ သွင်းအားစုဖြစ်သော စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်နေမှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် ပြည်တွင်း ထု